Bittrex ga-ekwe ka investors ịzụta cryptocurrency na US dollar
Investors ugbu a nwere a ohere ọhụrụ ịzụta cryptocurrencies na US dollar.
Bittrex, a Seattle dabeere cryptocurrency exchange, ruru nkwekọrịta na-enye ohere investors ịzụta digital na mkpụrụ ego US dollar. N'oge gara aga, naanị mkpụrụ ego ahịa na Coinbase, a digital ego na California, ike ike zụta na dollar. Nke ahụ bụ akụkụ dị nta nke dị 1500 digital ego sere n'elu cryptocurrenices eluigwe na ala.
Ịzụta ọzọ ego, investors mbụ nwere iji tọghata ha ego n'ime Bitcoin. Ugbu a, ha nwere Bittrex.
Nchoputa na CEO Bill Shihara gwara CNBC na ihe mgbaru ọsọ bụ “mụbaa dị ka ọtụtụ ahịa dị ka o kwere na Bittrex,” ọ sịrị na Friday “Fast Ego.”
“Nakwa dị ka ịgbasa ya, ọ bụla ahịa na Bittrex ga-enwe ike ịnweta US dollar ahia,” ọ si.
The mgbanwe pụrụ ọbụna inyere ịkwaga ahịa. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ego nwere ike na-zụrụ site na Bitcoin, uru nke Bitcoin na ọtụtụ ndị ọzọ digital ego mekọrịtara anya. The uru nke ndị a kaadị nkeji nwere ike ugbu a na-amalite decouple si Bitcoin, Shihara kwuru, dị ka ọzọ investors ahia na dollar.
Ugbu, fọrọ nke nta 200 dị iche iche digital mkpụrụ ego nwere ike ahịa na Bittrex. The CEO kwuru na a “obere, họrọ nọmba nke mmalite mmekọ” arụ ọrụ na ngwaahịa ahịa na-akwụ ụgwọ na dollar.
“Mgbe a na ogbo anyị na-anwale anyị usoro,” ọ si. “Anyị na-arụ ọrụ anya na mmiri iji jide n'aka na ha nwere ike hazie Fiat ego na withdrawals, na engine anyị ahia na ga-enwe ike imeri ihe ibu nke ọma.”
Cryptocurrency anọgide n'ụzọ unregulated na United States, eme ka ọtụtụ ego oru na investors ịkpachara anya banyere mkpụrụ ego a odida obodo nke zuru ebe nile igwu wayo na counterfeiting ICOs. Ndị ọzọ na-azụ ahịa nyochaa mba ọzọ na ahịa itinye ego na digital akụ dị ka Bitcoin.
Kraken Daily Market Report maka 03.06.2018
$1.2M Ada aba
$139M ahịa gafee ahịa niile taa
Apple ngalaba-nchoputa Steve Wozniak enwe olileanya Bitcoin na-aghọ otu zuru ụwa ọnụ ego
Twitter CEO Jack Dorsey nso nso kwuru na ya na-ekwere bitcoin ga-aghọ otu zuru ụwa ọnụ ego, ihe na Apple ngalaba-nchoputa Steve Wozniak na-enwe olileanya ga-eme.
“M na-azụta ihe Jack Dorsey kwuru, bụghị na m bụchaghị kwere ya na-aga ime, ma n'ihi na m chọrọ ya na-adị otú ahụ, dị otú ahụ dị ọcha echiche… Bitcoin na-mathematically kọwaa, e nwere ụfọdụ ukwu nke bitcoin, e nwere ihe a otú ọ na-na-ekesa ... na ọ bụ dị ọcha na e nweghị mmadụ na-agba ọsọ, e nweghị ụlọ ọrụ na-agba ọsọ na ọ bụ dị nnọọ ... na-eto eto na-eto eto ... na ndụ, na m na-ekwu ihe na-eke na ọdịdị dị mkpa karịa ihe niile anyị mmadụ mgbakọ.”
Izi ozi ibu Line ...
bitcoinngọngọ yinyekaadịcryptocurrencymgbanweicoozin'elu ikpo okwu
Previous Post:Ethereum obere akpa ImToken nwere $ 35B na ego, karịrị 99% nke US mmiri